မဆုံးရှုံးနိူင်သောကယ်တင်ခြင်းအထောက်အထား | An Infallible Proof of Salvation| Real Conversion
၂၀၁၂၊ ဇူလိုင်လ ၂၂ရက်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ တဲတော်နှစ်ခြင်း၊ အသင်းတော်၊ သခင်ဘုရားနေ့ မနက်ပိုင်းဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ဟောကြားသော ဒေသနာတော်၊
“ငါတို့သည် ညီအစ်ကိုချင်းတို့ကို ချစ်သောကြောင့်၊ သေခြင်းမှအသင်ရှင် ခြင်းသို့ မိမိတို့ ကူးမြောက်သည်ကို မိမိတို့သိရကြ၏” (၁ယော၃း၁၄)။
ကျွန်ုပ်သည် တရားဒေသနာတော်ကို ဟောလျှင်ဟောခြင်းပဲ၊ မှန်ကန်သော ကျမ်းပိုဒ်၏ အနက်အဓိပ္ပါယ်ကို ဦးစွာရှာဖွေပါသည်၊ ဒုတိယအနေဖြင့်၊ ၎င်းဒေသနာ တော်နှင့် ကိုယ်ညီမည့် ဓမ္မသီချင်းကို အဆိုရှင်မစ္စတာဂရိဖက်စ် သီဆိုဖို့ရန် ရှာဖွေပြီး မှဘဲ၊ တရားဒေသနာတော်ကို ဟောကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤတရားဒေသနာတော်နှင့် ကိုက်ညီမည့် “တပည့်တော်အချင်းချင်းချစ်ခြင်းကျူး”ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကို ထိုအဆိုရှင် အား သီဆိုပေးရန်တိုက်တွန်းခဲ့ပါသည်။ အခြားသော ဓမ္မသီချင်းသီဆိုချင်သေးသော် လည်း အကြိုက်ရှာမတွေ့ဘဲဖြစ်နေပါသည်။ ယနေ့ခေတ် သစ်ဓမ္မသီချင်းများစွာ ရှိသော် လည်း၊ ခရစ်ယာဉ်ညီအကိုများ၏ ချစ်မေတ္တာနှင့်ကိုက်ညီသော သီချင်းကိုကား မတွေ့ရပေ! ဝမ်းနည်းခြင်းနှင့် နှလုံးကြေကွဲစွာဖြင့် အခြားသော ဓမ္မသီချင်းကိုရှာဖွေခဲ့ပါ သော်လည်း အတွေ့ရပေ။ “ယနေ့ခေတ်ကာလ အသင်းတော်ထဲ၌ ခရစ်ယာဉ်တို့၏ ချစ်မေတ္တာကို အထူးတလေဖွဲ့နွဲ့သီဆိုခြင်းမရှိရခြင်းကား အဘယ်သို့နည်း?”ဟူ၍ ကျွန်ုပ်တွေးတောမိသည်။ထို့ကြောင့် ပရောဖက်ပြုချက်နှင့်ဆိုင်သော ယေရှုမိန့်တော်မူသော နုတ်ကပတ်တော်ကို ဘုရားသခင်၏ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က၊ ကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံး သားထဲ ဖေါ်ပြပေးခြင်းဖြစ်မည်။
“မတရားသောအမှုတို့သည် များပြားသဖြင့် အများသောသူတို့၏ချစ်ခြင်း မေတ္တာသည် ခေါင်းပါးလိမ့်မည်” (မဿဲ၂၄း၁၂)။
“ဤကပ်ကမ္ဘာကုန်သော ပုပ္ပနိမိတ်” (မဿဲ ၂၄း၃)ဟူ၍ ကပ်ကာလ၏အတိတ်နမိတ်ကို ယေရှုခရစ် သတိပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုသမိုင်းဆိုင်ရာ ကပ်ကမ္ဘာထဲ ကျွန်ုပ်တို့ယ္ခု ရောက်ရှိနေကြပါပြီလား? တရားစီရင်ခြင်းမတိုင်ခင်၊ နောက်ဆုံးသောကာလထဲ ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိနေကြပြီလား? ဘုရားသခင်၏ အမျက်တော်သည် ဆိုးညစ်သော လူသားတို့အပေါ် သွန်းလောင်းမဲ့ကာလထဲ ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိနေကြသည်ဟု နိမိတ် လက္ခဏာ တခုချင်းစီကဖေါ်ပြနေပါသည်။ “ကိုယ်တော်သည် ကြွလာ၍ ဤကပ်ကမ္ဘာ ကုန်သော နိမိတ်သည် အဘယ်နိမိတ်ဖြစ်မည်ကို၎င်း၊ အမိန့်တော်ရှိပါဟု လျှောက်ကြ၏” (မဿဲ၂၄း၃)ဟူ၍ တပည့်တော်တို့ မေးမြန်းခဲ့ကြသည်။ ထိုနိမိတ်လက္ခဏာတို့နှင့် ပါတ်သက်၍ အဖြေကို အောက်ပါအတိုင်းပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
“မတရားသောအမှုတို့သည် များပြားသဖြင့် အများသောသူတို့၏ချစ်ခြင်း မေတ္တာသည် ခေါင်းပါးလိမ့်မည်” (မဿဲ ၂၄း၁၂)။
မဿဲ၂၄း၁၂၌ ဖေါ်ပြထားသော “မေတ္တာ”သည် ဒဒagစေနဓ ဟူသော ဂရိဘာသာ စကားဖြင့် အဓိပ္ပါယ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဂျော့ခ်ျရိတ်ကာဘေရီပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ ၎င်းသည် “နွေးထွေးသော မေတ္တာအရင်းခံ၊ သဘာ၀ဝိညာဉ်အရချစ်ခြင်း” ဖြစ်သည်ဟုဆို၏ (Greek-English New Testament Lexicon). Agape မဿဲ၂၄း၁၂၌ ဖေါ်ပြထားသော “မေတ္တာ”သည် ဒဒagစေနဓ ဟူသော ဂရိဘာသာ စကားဖြင့် အဓိပ္ပါယ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဂျော့ခ်ျရိတ်ကာဘေရီပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ ၎င်းသည် “နွေးထွေးသော မေတ္တာအရင်းခံ၊ သဘာ၀ဝိညာဉ်အရချစ်ခြင်း” ဖြစ်သည်ဟုဆို၏
ကျွန်ုပ်၏ လက်ဦးသင်းအုပ်ဆရာ ဒေါက်တာတီမောသေလင်းသည်၊ သမ္မာကျမ်းစာ ဆိုင်ရာ၊ ဘာသာစကား အထူးတတ်မြောက်သူဖြစ်ပြီး၊ သမ္မာကျမ်းစာ ပါမောက္ခတဦး လည်းဖြစ်၏ နောင်တွင်ထိုသူသည် ထိုင်ဝမ်းကျမ်းစာ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးလည်း ဖြစ်ခဲ့ ပါသည်။ အာဂါပေ၊ ဟုဆိုရာတွင် ဒေါက်တာလင်းပြောကြားခဲ့သည်မှာ “တဦးနှင့်တဦး ချစ်ခြင်းနှင့် သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ကိုးစားရပါမည်။ ထိုနည်းတူတဦးကို တဦးချစ်ကြရ ပါမည်!ဟူသော ဤကပ်ကမ္ဘာအဆုံးကာလ အသင်းတော်များ ဤအရေးကြီးသုံးချက်ကို စဉ်းစားတွေးတောကြဖို့လိုပါသည်”။ (Timothy Lin, Ph.D., The Secret of Church Growth, First Chinese Baptist Church of Los Angeles, 1992, pp. 28, 29).
ဒေါက်တာလင်းပြောကြားသမျှသည် အမှန်တရားပင်ဖြစ်ပါသည်! ကယ်တင်ခြင်း ဆိုင်ရာ ယုံကြည်ခြင်းသည်၊ ခရစ်ယာဉ်ညီအကိုများအတွက် စစ်မှန်စွာ ချစ်ခြင်းနှင့်အမျှ အရေးကြီးပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဤကဲ့သို့ ချစ်ခြင်းကို သမ္မာကျမ်းစာတော်၌ တွေ့ရပါသည်။
“ငါတို့သည် ညီအကိုချင်းတို့ကို ချစ်သောကြောင့်၊ သေခြင်းမှအသက်ရှင် ခြင်းသို့ မိမိတို့ကူးမြောက်သည်ကို မိမိတို့သိရကြ၏’ ‘(၁ယာ၃း၁၄)။
ဤကျမ်းပိုဒ်၌ တွေးတောစဉ်းစားရန် အချက်နှစ်ချက်ရှိနေပါသည်။ သေခြင်းမှအသက် ရှင်ခြင်းသို့ ကူးမြောက်ဖို့ရန်၊ ညီအကိုချင်းတို့ကို ချစ်ခြင်းဖြင့် သက်သေရှိရမည်။ ညီအစ်ကို ချင်းတို့ကို မချစ်နိုင်ခြင်းသည် သေခြင်းမှမကူးမြောက်သေးသည်ကို သိစေပါသည်။ ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် နောက်ထပ်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ ကူးမြောက် လိုငှါ တတိယအချက်ကို ဖေါ်ပြလိုပါသည်။ ပို၍နီးကပ်စွာ ကြည့်ကြပါစို့လား။
၁။ ပထမ၊ သင်ထာ၀ရအသက်ရရှိခြင်းမဟုတ်သော အထောက်အထား၊
ဘုရားရှိခိုးကျောင်း တက်ရောက်ခြင်းသည်၊ သင်ထာ၀ရအသက်ရရှိခြင်း၏ အထောက်အထားမဟုတ်ပါ။ ထောင်နှင့်ချီသောသူတို့သည် အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့ ဘုရား ရှိခိုးကျောင်းသို့ တက်ရောက်ကြသော်လည်း၊ ထာ၀ရအသက်ရရှိသည်ကား မဟုတ်ကြချေ ထာ၀ရအသက်ရှင်ခြင်းသို့ ကူးမြောက်ခြင်းသည်ကား၊ အသစ်တဖန် မွေးဖွါးရမည်ဖြစ်ပြီး “အပြစ်သားတို့သည် မိမိတို့အပြစ်ကြောင့် သေကြရမည်ဖြစ်သည်၊ သေခြင်းအပြစ်ငရဲမှ ပြန်ရှင်ကြရမည်။ ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ထာ၀ရအသက်ရှင်ခြင်းကို ရရှိခြင်းဖြစ်သည်၊ ထာ၀ရအသက်ရှင်ခြင်းသို့ ကူးမြောက်ခြင်းသည် သူတို့ကို သူတို့လုပ်ဆောင်ကြ၍မဟုတ် ပါ။ လူသည် ထာ၀ရအသက်ရှင်ခြင်းအဖို့ မိမိကိုကို မဆုံးမနိုင်ပါ၊ သေခြင်းမှလည်းပြန် ရှင်ခြင်းငှါမတတ်နိုင်ကြ၊ အဖခမည်းတော်သာလျှင်၊ တတ်နိုင်တော်မူသည်၊ ထိုအရှင် သခင်ကသာလျှင်၊ သေခြင်းတန်ခိုးမှ ကျွန်ုပ်တို့kကို လွတ်မြောက်စေနိုင်ပါသည်။ သားတော်၏ နိုင်ငံတော်၌ ကျွန်ုပ်တို့ကို ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။ ၎င်းက ထာ၀ရအ သက်ရှင်ခြင်းနှင့် အလင်းလင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ လူသည်အပြစ်၌ သေနေပါ သည်။ အခုဆိုလျှင် အသက်ရှင်ရပြီဖြစ်သည်။ ဤသို့ဖြင့်သာ “ညီအကိုချင်းတို့ကို ချစ်နေ ခြင်း”ဖြစ်ပါသည်။ ညီအစ်ကိုချင်းကို ချစ်၍ထာ၀ရအသက်ရသည်မဟုတ်ပဲ ထာ၀ရအ သက်ရရှိသောသူဖြစ်၍ တပါးသူတို့ကို ချစ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် လူတို့ကို ဘ၀သစ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်၊ သို့မဟုတ်လျှင် ခရစ်တော်၌ရှိသော၊ သန့်ရှင်းသူတို့ကို မည်သူချစ်နိုင်မည်နည်း၊ အသစ်မွေးဖွါးခြင်း၊ ဘုရားသားဖြစ်ခြင်းမရှိဘဲ၊ မည်သူကမှ ထိုသို့မပြုနိုင်ပေ၊ ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်သာလျှင်၊ ထိုကဲ့သို့ လူသားတို့လုပ်ဆောင်နိုင်ကြ ခြင်းဖြစ်သည်”။ (John Gill, D.D., An Exposition of the New Testament, The Baptist Standard Bearer, 1989 reprint, volume III. p. 640; note on I John 3:14).
ထို့ကြောင့် ထပ်တလဲလဲပြောပါမည်၊ အပတ်စဉ် ဘုရားကျောင်းတက်ရောက်ရုံဖြင့် သင်ထာ၀ရအသက်မရနိုင်ပါ၊ သင်ထာ၀ရ အသက်ရခြင်း၏ အထောက်ထားသည် သင် ဘုရားကျောင်းတက်ရုံမျှမဟုတ်နိုင်ပေ၊ ထို့အတွက်ကြောင့်၊ ဤနောက်ဆုံးသော ကပ်ကာ လ၏ အဆုံးနေ့ရက်တွင် အသင်းသူ^သားတို့သည် တဦးနှင့်တဦးချစ်ခြင်းမေတ္တာ မရှိကြ ပေ။ တဦးနှင့်တဦး ခိုက်ရန်ပြုကြနေကြပြီဖြစ်သည်။ အချို့တို့မူကား မိမိတို့သင်းအုပ် ဆရာကိုပင် မုန်းတီးနေကြပြီဖြစ်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့ ပြသာနာတို့၏အမြစ်ကား အသစ်တ ဖန်မွေးဖွါးခြင်း မရှိသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်!
“ငါတို့သည် ညီအကိုချင်းတို့ကို ချစ်သောကြောင့် သေခြင်းမှအသက်ရှင် ခြင်းသို့ မိမိတို့ ကူးမြောက်သည်ကို မိမိတို့သိရကြ၏။ မိမိညီအစ်ကို ကိုမချစ်သောသူသည် သေခြင်း၌တည်၏” (၁ယော ၃း၁၄)။
ထိုအတွက်ကြောင့်၊ ညီအစ်ကိုချင်း မုန်းတီးသောသူတို့သည် လူသတ်သမားဟူ၍ ဘုရားသခင် မြင်တော်မူသည်၊ တမန်တော်ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊
“မိမိညီအစ်ကိုကို မုန်းသောသူမည်သည်ကား၊ ဠူအသက်ကိုသတ်သောသူ ဖြစ်၏ လူအသက်ကို သတ်သောသူတစုံတယောက်၌မျှ ထာ၀ရအသက် မတည်သည်ကို သင်တို့သိကြ၏” (၁ယော ၃း၁၅)။
နောက်ပြီး၊ သမ္မာကျမ်းစာကို ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းသည်လည်း သင်ထာ၀ရ သက်ရရှိခြင်း မဟုတ်၊ သေခြင်းမှ ထာ၀ရအသက်ရှင်ခြင်းသို့ ကူးမြောက်ခြင်းမဟုတ်ပေ။ မာန်နတ်သည် “ကယ်တင်ခြင်းလမ်းစဉ်”နှင့် နည်းလမ်းကို သိရှိသူဖြစ်သည်။ သတင်း ကောင်းလေးကျမ်း၌ စာတန်မာန်နတ်၏ အကြောင်းရှင်းလင်းစွာ ဖေါ်ပြထားပါသည်။ ထိုသူတို့က ယေရှုမည်သူဖြစ်သည်ကို သိကြသည်။ နောက်ဆုံး တရားစီရင်ခြင်းကို လည်းသိထားကြသည်။ စာတန်သည်လည်း၊ ယေရှုရက်ပေါင်းလေးဆယ် အစာအဟာရ ပြတ်၍ ဆာလောင်နေသည်ကို မာန်နတ်သိ၍ သမ္မာကျမ်းစာကို ကိုးကားပြီး တိုက်ခိုက် သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သိကြပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မာန်နတ်သည် များစွာသော အသင်းတော် သူ^သားများတို့ထက်ပို၍ လိမ်မာပါးနပ်ပါသည်။ “နတ်ဆိုးတို့သည် ယုံ၍ ကြောက်ရွံ့ တုန်လှုပ်ကြ၏”(ယာကုပ်၂း၁၉)။ မည်မျှလောက်သော အသင်းသူ^သားတို့ “ကြောက်ရွံ့၍ တုန်လှုပ်”ကြသနည်း? ထို့အပြင် မာန်နတ်သည် ခရစ်ယာဉ်ဟု ခေါ်ဝေါ်သောသူတို့ထက် ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ မြင်သာခြင်းရှိသည်!ထို့အပြင် သင်၏သမ္မာ ကျမ်းစာကို ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ကယ်တင်ခြင်းအစီစဉ်၌ အာမခံချက်မရှိဖြစ်နေသည်ကို စာတန်ရှင်းလင်းစွာမြင်ပါသည်။
ထို့အပြင်၊ မိမိသည်ကယ်တင်ခြင်းရရှိပြီဖြစ်ကြောင်း၊ လူရှေ့၊သူရှေ့ “သက်သေခံ ခြင်း”သည်လည်း သင်၏ကယ်တင်ခြင်းရရှိကြောင်း အထောက်အထား မဟုတ်သေးချေ၊ နတ်ဝိဇ္ဇာရှိမှန်သည်လည်း ဧဝံဂေလိဆရာဖိလိပ္ပုထံ မှီဝဲဆည်းကပ်ခဲ့ပါသည်။(တမန်၈း၁၃) သို့သော် တမန်တော်ပေတရုသည် ဖိလိပ္ပုထက်သာလွန် ဉာဏာ်ပညာကြွယ်၀၏ ရှင်ပေ တရု၊ ရှင်မာရိမြို့သို့ ရောက်သောအခါ၊ ရှိမုန်အား “သင်၏စိတ်နှလုံးသည် ဘုရားသခင် ရှေ့တော်၌ ဖြောင့်မတ်ခြင်းမရှိ” (တမန်၈း၂၁)ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဖိလိပ္ပုက ရှိမုန် သည် မိမိ၏အပြစ်ကိုဝန်ချလျှက်၊ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာကို ပေးအပ်ခဲ့သော်လည်း၊ သူ့၏စိတ် နှလုံးသည်ကား အသစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိချေ။ ထိုမပြောင်းလဲသော စိတ်နှလုံးသား အားဖြင့် မရိုသားသောနည်းဖြင့် “တန်ခိုး”ရရှိလိုပြီး လူတွေကို အုပ်ချည်ချင်သူဖြစ်လာခဲ့ သည်(တမန်၈း၁၉)။ ကနေ့၊ အသစ်သောအသက်တာ၌ မပြောင်းလဲသော တရားဟော ဆရာတို့သည် ထိုကဲ့သို့ပင်ဖြစ်လိုကြည်။ ထိုသူတို့၌ အာဂါပေချစ်မေတ္တာအမှန်မရှိကြပေ။ ထိုသူတို့သည် မိမိတို့အကျိုးအမြတ်ကို မတရားနည်းဖြင့် ရယူလိုကြပါသည်။ ထိုသူတို့ သည် နုတ်ဝိဇ္ဇရှိမုန်ကဲ့သို့ “နုတ်ကတိ” ကို ပေးတတ်ကြပြီး စေ့စပ်သေချောစွာ စစ်ကြော မေးမြန်းခြင်းမရှိကြပေ။ ထိုသူတို့က “သခင်၊သခင်၊ အကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်အခွင့် နှင့်ဆုံးမဩဝါဒ ပေးပါပြီမဟုတ်လော့? ထိုသို့လျှောက်ကြသော်လည်း ခရစ်တော်ဘုရား က” “သင်တို့ကို ငါအလျင်းမသိ၊ အဓမ္မအမှုကို ပြုသောသူတို့ ငါ့ထံမှဖယ်ကြဟု ထိုသူတို့အား အတည့်အလင်းငါပြောမည်”(မဿဲ၇း၂၂-၂၃)ဟူ၍ မိန့်တော်မူ၏ ထိုသို့ဖြင့် “နုတ်ကတိဝန်ခံခြင်း”သည် သင်ကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်း၏ အထောက်အထား၊ မပြည့်စုံ သေးပေ။
သင့်ကိုသင့်၊ ငါသည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိပါပြီဟု ပြောနေခြင်းဖြင့် သင်၏ကယ် တင်ခြင်းသည် မခိုင်လုံသေး၊ စစ်မှန်သော အသစ်မွေးဖွါးခြင်းကို သင်တွေ့ကြုံခံစားဖို့ လိုပါသည်။ ဤမြို့ပေါ်လမ်းမထက်သွားပြီး တွေ့သမျှသူတို့အား သင်တို့သည် ကယ်တင် ခြင်းရရှိကြပြီလား သေသွားရင်ကောင်းကင်သို့ တက်မလား ငရဲထဲကျမလားဟူ၍ မေးကြည့်ပါ။ ထိုသူတို့က ငါတို့သည် ဘုရားမဲ့လူသားမဟုတ်ကြဘူး (အားလုံးနီးပါး)ဟူ ၍ ပြောကြမည်ဖြစ်ပြီး၊ ငါတို့သည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိပြီဟုလည်း ပြောကြပါလိမ့်မည်။ Evangelical အမေရိကန်စကားသုံး စပိန်လူမျိုးတို့လည်း ကယ်တင်ခြင်းလိုအပ်ကြပါ တယ်၊ အာရှတိုက်၌ရှိ Evangelical တို့အားလုံးလည်း ကယ်တင်ခြင်းလိုအပ်နေကြတယ်။ လူဖြူတို့လည်း မိမိသည်ကယ်တင်ခြင်းရရှိပြီလားဟူသည်ပင် အသေအချာ မစဉ်းစားကြ တော့ပေ! အမေရိကန်စစ်တမ်းအရ ၇၄%ရာခိုင်နှုန်းသော အမေရိကန်လူမျိုးတို့သည် မိမိ တို့အသက်တာကို ခရစ်တော်၌ ဆက်ကပ်အပ်နှံကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အထောက် အထားက ဘာတွေနည်း? ထိုသူတို့သည် မိမိတို့ကို လိမ်ညာပြီး နုတ်ကတိဝန်ခံကြမည် သာဖြစ်ပါသည်! သမ္မာကျမ်းစာ၌ မိန့်တော်မူသည်ကား
“ဆိုးညစ်သောသူ၊ လှည့်ဖြားသောသူတို့မူကား၊ သူတပါးကို၎င်း၊ ကိုယ်ကို၎င်း၊ လှည့်ဖြား၍ ဆိုးညစ်ခြင်း၌ တရွေ့ရွေ့တိုးပွါးကြ လိမ့်မည်” (၂တိ၃း၁၃)။
မိတ်ဆွေကော့ အဘယ်သို့နည်း? သင်လည်း မိမိကိုကိုလှည့်ဖြားနေသူလား? သင်တို့ အဖို့ ထာ၀ရအသက်ရှင်ခြင်းသို့ ကူးမြောက်ရန် အခြားသော အထောက်အထားရှိလိမ့်မည် မထင်၊ အသစ်သော အသက်တာပြောင်းလဲခြင်းကလွဲလို့ပေါ့ဗျာ့။
၂။ ဒုတိယ၊ သင်ထာ၀ရအသက်ရရှိခြင်း၏ အထောက်အထား
သင့်ကို သင်မေးကြည့်ပါ “ကျွန်ုပ်၌ထာ၀ရအသက်ရရှိနေပြီးလား? ထိုမေးခွန်းကို သင်ဘယ်လို အဖြေပေးမည်နည်း? အချို့တို့ကလည်း ဆုတောင်းခြင်းဟူ၍ ဖြေဆိုကြပါ လိမ့်မည်။ ဆုတောင်းခြင်း တခုတည်းကလည်း သင်၏ ထာ၀ရအသက်အတွက် အထောက်အထား မဟုတ်သေးချေ။ ထိုသို့မဟုတ်နိုင်သေးချေ၊ ကျွန်ုပ်အသက်တာမ ပြောင်းလဲခင် ကျွန်ုပ်ဆုတောင်းခြင်းအဖြေကို ရရှိခဲ့သည်။ လူတဦးပြောဖူးသည်မှာ “ဘုရားသခင်သည် လူဆိုးတို့၏စကားကို နားထောင်တော်မမူသည်ကို ငါတို့သိကြ၏” (မဿဲ၉း၃၁)ဟူ၍ ပြောခဲ့ပါသည်။ ထိုသူတို့သည် ဖါရိရှဲတို့၏ ယုံကြည်ခံယူချက်ကို ရေတွက် ယုံကြည်နေသူဖြစ်သည်။ သူသည် ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ကိုးစားပြီး “ပျပ်ညွတ်ကိုးကွယ်ခြင်း” (ယောဟန်၉း၃၈) မရှိဘဲ၊ အသက်တာပြောင်းလဲသေးသူမဟုတ် ချေ။ ဝိညာဉ်ပျောက်ဆုံးနေသူတို့၏ ဆုတောင်းသံကို ဘုရားသခင်ကြားတော်မမူလျှင်၊ သနားခြင်းဂရုဏာတော်ဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းရရှိသေသူမဟုတ်နိုင်ချေ။
“အကြောင်းမူကား ထာ၀ရဘုရားကို ပဌနာပြုသောသူရှိမျှတို့သည် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ ရောက်ရကြလတ္တံ့” (ရောမ ၁ဝး၁၃)။
ထာ၀ရအသက်နှင့် ပါတ်သက်သော သက်သေ၊ အထောက်အထားများစွာ ရှိပါသည်၊ သို့သော် သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်၌ တိကျခိုင်မာစွာ မိန့်တော်မူထား ပါသည်။
“ငါတို့သည် ညီအစ်ကိုချင်းတို့ကို ချစ်သောကြောင့် သေခြင်းမှအသက်ရှင် ခြင်းသို့ မိမိတို့ကူးမြောက်သည်ကို မိမိတို့သိရကြ၏” (၁ယော၃း၁၄)။
သင်သည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိသူမဟုတ်သော်လည်း၊ တပါးသူတို့သည် သင်အပေါ်အပြု သဘောဆောင်သောအခါ၊ သင်လည်း သူ့အားချစ်ကောင်းချစ်နေမည်၊ သင်သည် ဘုရား သခင်၏ သားဖြစ်သောအခါ၊ သူတပါးအားလည်း သင်ချစ်နေမည်၊ ခရစ်တော်၏အဖွဲ့ သားဖြစ်သောကြောင့်၊ သူတပါးကို ချစ်နေနိုင်ပါသော်လည်း၊ ဝိညာဉ်သေနေခြင်းမှ မိမိကိုကို မကယ်တင်နိုင်ပါ၊
လူငယ်များ ဤအမှန်တရားကိုကား သိကြပါသည်။ စစ်မှန်သော အသက်တာ၌ ပြောင်းလဲသောအခါတွင်၊ စစ်မှန်စွာ အသက်တာမပြောင်းလဲသောသူတို့ကို ခွဲခြားသိမြင် နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုသူတို့ထဲက ခွဲထွက်လာပြီး သီးခြားနေထိုင်ပါလိမ့်မည်။ အသစ် သောအသက်တာ၌ ပြောင်းလဲသောသူသည် ဝိညာဉ်ပျောက်ဆုံးနေသူကို ယုံကြည်မည် မဟုတ်ပေ။ အသင်းတော်၌ တက်ရောက်လာသော သူငယ်ချင်းတို့ကိုလည်း အပေါင်းအ ဖော်လုပ်ချင်မည် မဟုတ်တော့ပေ။
ဤသည်ကား အသစ်အဆန်းတော့မဟုတ်ပါ။ မကြာသေးသောတနေ့က၊ ၁၉ရာစု ဒုတိယအကြိမ် ဝိညာဉ်နိုးကြားရေးကာလအတွင်းက လူငယ်တစ်စုတို့၏ အကြောင်းကို ဖတ်ကြားခဲ့ပါသည်။ အသက်တာ အသစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲသောသူတို့အား နိုးကြားရေး၌ အသက်တာမပြောင်းလဲသောသူတို့က အပေါင်းအဖော်မလုပ်လိုကြပေ။ အသင်းတော်၌ အသက်ရှင်ခြင်းသို့ ကူးမြောက်သောသူတို့အား၊ သူ့အပေါင်းအဖော်တို့ တစိမ်းဆန်နေ ဘိသကဲ့သို့၊ ခံစားစေပါသည်။ အသင်းတော်အတွင်း၌၊ စစ်မှန်၍ အသက်တာသစ်၌ လျှောက်လှမ်းသော လူငယ်များရှိသောအခါ၊ ကျန်သောမပြောင်းလဲသူတို့သည် သီးသန့် သင်းဖွဲ့ကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အသက်တာပြောင်းလဲ သူတို့ကို အပေါင်းအဖော်မပြု လိုကြတော့ပေ၊
စစ်မှန်၍ အသက်တာပြောင်းလဲသော လူငယ်တဦးသည် အသင်းတော်၌ ဝိညာဉ် ပျောက်ဆုံးနေသူတို့မှ သီးသန့်နေထိုင်သည်ကို တွေ့ခဲ့ဖူးပါသည်၊ ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ ရင့်ကျက်သော အသင်းတော်၌ရှိ သူတို့နှင့်သာ အပေါင်းအဖေါ် လုပ်တက်လာပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ မိမိခွဲခြားနေလို၍ မဟုတ်ပါ၊ ရင့်ကျက်သောသူတို့က ထိုသို့နေတတ်ရန် သွန် သင်၍ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ နေထိုင်တတ်ရန် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်က ပဲပြင် သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ သန့်ရှင်းစွာ နေထိုင်ရန်ခွဲခြား သိမြင်လာခြင်းဖြစ်ပါ သည်။ ထိုလူငယ်မူကား လောကီလူသားတို့နှင့် သီးခြားရှောင်ဖယ် နေထိုင်လိုခြင်းတော့ မဟုတ်ပေ။ မိမိတို့အသက်တာသဘော သဘာ၀အားဖြင့် သူတို့သည် မရောနှော၊ မပေါင်းစပ်နိုင်ကြ၍ဖြစ်ပါသည်။ ကာဣနနှင့်အာဗေလတို့ကဲ့သို့ အတူမနေနိုင်ကြတောပေ၊
“သင်တို့သည် ရှေ့ဦးစွာကပင် ကြားရသောတရားစကားဟူမူကား၊ မာန်နတ်နှင့်ဆိုင်၍ မိမိညီကိုသတ်သော ကာဣနကဲ့သို့မဟုတ်၊ ငါတို့သည် အချင်းချင်းချစ်ရကြမည်ဟု လာသတည်း၊ ကာဣန သည် မိမိညီကို အဘယ်ကြောင့်သတ်သနည်းဟူမူကား၊ dမိအကျင့် သည် ဆိုးယုတ်၍ ညီ၏အကျင့်သည် ဖြောင့်မတ်သတည်း၊ ညီအကို တို့၊ လောကီသားတို့သည် သင်တို့ကို မုန်းသော်လည်း အံ့ဩခြင်းမရှိ ကြနှင့်” (၁ယော ၃း၁၁-၁၃)။
အသက်ရှင်ခြင်းသို့ ကူးမြောက်သောသူတို့၏ လက္ခဏာဟူမူကား၊ တပါးသူတို့ သည် သင့်အပေါ် ဆိုးသွမ်းကြသော်လည်း၊ သင်သည်နှိမ့်ချစွာဖြင့် တပါးသူတို့အားချစ် တတ်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ လောကီလူသားတို့၏ မုန်းတီးခြင်းခံရသောသူတို့အား သင်သည်အမှန်ချစ်လျှင်၊ သင်သည် စစ်မှန်သော ခရစ်ယာဉ်တဦးဖြစ်နေပါသည်။ ထိုအခါ သင်သည် သူတပါးတို့ဘက်၌ ရပ်တည်နေမည်ဖြစ်ပြီး၊ ထိုသူတို့ဖက်မှ ခုခံကာကွယ်နေ မည်ဖြစ်သည်။ “သင်တို့ခရစ်ယာဉ်လည်း တိုက်ခိုက်ကြတာပဲလား”? ဟူ၍ သင်လည်း ဆိုနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်အနေနှင့်လည်း ထိုအတူပဲခံစားသည် အကယ်၍ သူ့ကို ညှင်းပန်းနှိပ်စက်နေခြင်းသည် ကျွန်ုပ်ကိုလည်း ညှင်းပန်းနေသကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသားဖြစ်နေသူအား ဂုဏာ်သိက္ခာ ညိုးနွမ်းစေခြင်းမှ ကာကွယ်မည်ဖြစ်၍ သူ့ဘက် ၌ အစဉ်ကျွန်ုပ်ရပ်တည်နေမည်ဖြစ်သည်” အခြားသော ခရစ်ယာဉ်ညီအကိုများကို သင် ချစ်နေပါလျှင်၊ ဘာကိုမှကြောက်စရာမလိုပါ။ ဤသည်ကား၊ သင်သည်သေခြင်းမှ ထာ၀ရအသက်ရှင်ခြင်းသို့ ကူးမြောက်သောသူဖြစ်သည်ကို ထင်ရှားစေပါသည်! ('”Life Proved by Love” ကို စကားပြေပြန်သည် C.H. Spurgeon, The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1976, volume XLIV, pp. 81-83).
အသင်းတော်နှစ်ခြမ်းကွဲရခြင်းသည် ရှင်းလင်းစွာ ထင်ရှားပါသည်။ ခရစ်ယာဉ်တို့ ကို မုန်းတီးသောသူတို့သည် တခြားသင်းဖွဲ့၍ စုနေကြပြန်သည်။ ထိုကဲ့သို့ အသင်းတော် ကို ခွဲခြားသောသူတို့ကို ရှေ့ယုံကြည်သူတို့က “အိမ်နောက်ဖေးနိုးထမှု”ဟူ၍ ခေါ်ဝေါ်ကြ သည်။ ထိုနည်းတူစွာ မယုံကြည်သောသူတို့က အသင်းတော်၌ အသင်းဝင်စေသူတို့အား ဝမ်းနည်းဖွယ်ဖြစ်စေသည်။ ထိုသို့ အသင်းကွဲခြင်းသည် မယုံကြည်သော သူတို့ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသူတို့သည် မည်သို့ပင် ယုံကြည်သည်ဟု ဆိုစေကာမူ၊ ဘယ်တော့မှ မယုံကြည်သူများသာဖြစ်သည်။ ထိုသို့ မယုံကြည်သူတို့သည် ထိုသို့အသင်းတော်ကို ကွဲ စေခဲ့သူများဖြစ်ကြသည်။ တမန်တော်ရှင်ယောဟန် အောက်ပါအတိုင်းဖေါ်ပြထားပါသည်။
“ထိုသူတို့သည် ငါတို့ထံမှထွက်သွားကြ၏ သို့သော်လည်း အထက်က ငါတို့နှင့်ဆိုင်ကြ၏ သို့သော်လည်း အထက်က ငါတို့နှင့်မစပ်ဆိုင်ကြ၊ ငါတို့နှင့်စပ်ဆိုင်လျှင် ငါတို့နှင့်အတူနေကြလိမ့်မည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့ သည် ငါတို့နှင့်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကို ထင်ရှားစေခြင်းငှါ၊ gတို့ထဲမှထွက် သွားကြ၏” (၁ယော၂း၁၉)။
အများသော သူတို့သည် သေခြင်းမှအသက်ရှင်ခြင်းသို့ မကူးမြောက်ကြသောကြောင့် ထိုသူတို့သည် မိမိတို့ညီအကိုတို့ကို မချစ်တတ်ကြပေ! ထိုသူတို့၌ ထာ၀ရအသက်မရှိ သောကြောင့်ဖြစ်သည်! ၁၉၅၉ခုနှစ်၊ အသင်းတော်ထက်ခြင်း ကွဲပြားဖြစ်ရခြင်းကို ကျွန်ုပ်သက်သေခံဟောကြားခဲ့ပါ သည်။
၃။ တတိယ၊ သေခြင်းမှအသက်ရှင်ခြင်းသို့ မိမိတို့ကူးမြောက်သူတို့၌ မည်သို့ဖြစ် ပျက်လာမည်နည်း။
“ငါတို့သည် ညီအကိုချင်းတို့ကို ချစ်သောကြောင့် သေခြင်းမှအသက်ရှင် ခြင်းသို့ မိမိတို့ကူးမြောက်သည်ကို မိမိတို့သိရကြ၏။ မိမိတို့ညီအကိုကို မချစ်သောသူသည် သေခြင်း၌တည်၏” (၁ယော၃း၁၄)။
သေခြင်းမှအသက်ရှင်ခြင်းသို့ ကူးမြောက်ခြင်းသည်၊ မိမိတို့မျှော်လင့်ထားသကဲ့သို့ မဟုတ်ပေ။ ထိုကဲ့သို့ သေလုမျှော့ပါးမဟုတ်ချေ။ သေလုမျှော့ပါးမှ ဝိညာဉ်တော်အသစ်ပြု ပြင်ခြင်းဖြင့် အသစ်သော အသက်တာကို သင်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ တမန်တော်ရှင်ပေါ လုက အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါသည်။
“သင်တို့သည် အထက်ကလောကီတရားသို့လိုက်၍ (ဧဖက်၂း၁)။
သေနေသောဒုစရိုက်အပြစ်မှ မည်သို့”ပြုပြင်၍” အသက်ရှင်စေသနည်း? အောက်ဖော်ပြ ပါ၊အချက်များတို့သည် တစုံတယောက် အသက်တာပြောင်းလဲလာသောအခါ၊ ဝိညာဉ်ဘုရား၏ ပြုပြင်ခြင်းကို တွေ့ရကြုံရကြသည်။ ဤအချက်ကို ၁၉ရာစု၊ ရောဘတ် မိုရေးမက်ချေနီ၊ စကော့တီးစ်တရားဟော ဆရာကြီး၏ ကောက်နုတ်ချက်မှဖြစ်သည်။ (in Andrew A. Bonar, Memoirs of McCheyne, Moody Press, 1978 edition, pp. 251-253).
ဦးစွာ၊ ဝိညာဉ်တော်၏ပြုပြင်ခြင်းသည်၊ အပြစ်သားတဦးအား မိမိကျူးလွန်သမျှ ကို မြင်တွေ့စေပါသည်။ ဝိညာဉ်တော်ပြုပြင်ခြင်း မတိုင်ခင်၊ သင်သည်သင့်ကို မေ့လျှော့ နေမည်ဖြစ်သည်။ ဗျာဒိတ်၂ဝး၂၀၌ ဘုရားသခင်၏မှတ်တမ်းစာအုပ်၌ မှတ်တမ်းတင်ထား သော အပြစ်အားလုံး တခုချင်းစီကို သင်သည်သိလာတော့မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ထိုအခါ သင်သည် သင်လုပ်သမျှအပြစ်တို့ကို သတိရချင်စိတ်ရှိမည်မဟုတ်ပေ၊ ဝိညာဉ် တော်က သင့်အား သင်ပြုသမျှကို တခုချင်း ယူဆောင်ပြသပေးမည်ဖြစ်၍ သင်ကျူး လွန်သမျှကို သင်မှတ်မိလာပါတော့မည်။ အချိန်ကြာညောင်းခဲ့ပြီးသော အပြစ်အားလုံး သင့်စိတ်နှလုံးသားထဲ ပေါ်လာမည်၊ ဒါဝိဒ်မင်းကြီးပြောကြား သလိုပင်ဖြစ်သည်၊
“အကြောင်းမူကား၊ အတိုင်းအသိများစွာသော ဘေးခုပါဒ်တို့သည် ကျွန်ုပ် ကိုစိုင်းကြပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်မျှော်၍ ကြည်ပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်ဆံပင်ထက်များပြား သည်ဖြစ်၍ အကျွန်ုပ်နှလုံးသည် အားလျှော့ပါပြီ” (ဆာလံ၄ဝး၁၂)။
ဒုတိယအနေဖြင့်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က သင့်အပြစ်ကို ခါးသီးစွာခံစားစေ ပါမည်။ အစတွင် သင်က၊ မိမိ၏အပြစ်သည် အသေးမွားလေးပါဟု ပြောမည်ဖြစ်သော် လည်း၊ ယ္ခုတွင် သင်၏အပြစ်သည် ရေလွှမ်းသည့်ပမာ၊ တရစ်ရစ်နှင့်တက်လာ ပါမည်။ သင့်ဝိညာဉ်စီရင်ခြင်း၊ ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသကို ထိုအခါ သင်သည် နားလည် မည်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ ကြောက်ရွံ့ခြင်းကြောင့် တုန်လှုပ်လာပါလိမ့်မည်။ ထိုအခါ သင့်အပြစ်သည်၊ ဘုရားကို ဆန့်ကျင်နေကြောင်း၊ ဘုရားသခင်၏မေတ္တာကို ဆန့်ကျင် ကြောင်း၊ ယေရှုဘုရား၏ မေတ္တာကို ဆန့်ကျင့်ကြောင်း သင်သိလာပါမည်။
တတိယအနေဖြင့်၊ သင်သည် သင့်အပြစ်ကိုမြင်သောအခါ၊ စိတ်နှလုံးသားထဲဆိုး မိုက်လာမည်။ အပြစ်ပြုပြင်ခြင်းက မိမိတို့၏စိတ်နှလုံးထဲ၌ ပြင်းထန်သော ခံစားမှုဖြစ်စေ မည်။ တခါတရံအပြစ်ကို ဖေါ်ပြခြင်းနှင့် အပြစ်သွေးဆောင်ခြင်းဆုံလာနိုင်သဖြင့် သင့် ဝိညာဉ်အနေရခတ်ပါလိမ့်မည်။ အပြစ်ကိုဖေါ်ပြသောအခါ၊ သင့်နှလုံးသား ထိုနှက်ခြင်းခံ ရပြီးရောက်ရှိလာမည့် အမျက်ဒေါသမှလည်း ထွက်ပြေးချင်လာပါလိမ့်မည်။ ထိုစဉ် သင့်စိတ်နှလုံးသည် ဟောင်းနွမ်းစုတ်ပြဲရွံ့ရှာဖွယ်ဖြစ်သော၊ တပ်မက်ခြင်း၊ သဝန်တိုခြင်း သည် သင့်စိတ်နှလုံးသားထဲ ပလောင်ဆူနေပေလိမ့်မည်ဖြစ်၍ ငရဲထဲသို့တွင် သွားချင် စိတ်ပင်ပေါ်လာမည်။ ထိုအခါ ငရဲထဲရောက်ရှိဘိ သကဲ့သို့ သင်ခံစားနေပါလိမ့်မည်။ ငရဲ ထဲတွင် ကြောက်ရွံ့ဖွယ်များက လွှမ်းခြုံနေမည်ဖြစ်သည်၊ သင့်အထဲ၌ ဆိုးသွမ်းခြင်းခံစား ရမည်၊ ထိုဆိုးသွမ်းခြင်းတို့ကြောင့်၊ ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသကို ပို၍ခံစားရမည်၊ ငရဲထဲသို့ ရောက်သကဲ့သို့ ပူလောင်ခံစားနေမည်။ အပြစ်ကို ဆုံးမခြင်းကြောင့် သင်ရင်ထဲ ခံစားမှုအားလုံးသည် သင်အမှန်ခံစားတွေ့ကြုံရပါမည်။
စတုတ္တအနေဖြင့်၊ သင့်ကိုသင်အပြစ်ငရဲမှ မကယ်တင်နိုင်ကြောင်း ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်က ပဲပြင်ဆုံးမပါလိမ့်မည်။ အစတွင် သင်သည်ကြောက်လန့်ဖွယ်ခံစားမှုအား လုံးမှ ရှောင်ဖယ်နိုင်သည်ဟု တွေးထင်ပါလိမ့်မည်။ သင့်အသက်တာတခုလုံးပြောင်းလဲ လာဖို့၊ သင်ဆုတောင်းပြင့်ခြင်း၊ ကြိုးစားခဲ့ပါမည်။ သို့သော် သင်ကြိုးစားသမျှသည် ဟောင်နွမ်းသော အဝတ်စုတ်နှင့်တူကြောင်း တွေ့ရပါမည်။ “ကျွန်ုပ်တို့ရှိသမျှသည် စင်ကြယ်ခြင်းမရှိပါ၊ ပြုဖူးသမျှသော ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့သည် ညစ်ပတ်သော အဝတ်နှင့်တူကြပါ၏” (ဟေရှာ၆၄း၆)၊ သင့်ကိုသင်သန့်ရှင်းအောင် မလုပ်ဆောင်နိုင် ကြောင်း ထိုအခါသိလာပါမည်။ သင့်နှလုံးသားသည် မျှော်လင့်စရာမဲ့နေသည်ကို ခံစား လာပါမည်။ သင်၌လုံး၀မျှော်လင့်စရာမရှိသောကြောင်း နေ့စဉ်ပူလောင်ခံစား လာပါမည်။
ပဥ္စမအနေဖြင့်၊ ထိုအခါသင်သည်၊ သခင်ခရစ်တော်ထံ သင်မသွားရောက်နိုင် ကြောင်းသိလာ၍ သင်ကြောက်ရွံ့လာပါမည်။ ထိုအခါ သခင်ခရစ်တော်သည် သင်ကို ခေါ်နေကြောင်း၊ သင့်အားချစ်နေကြောင်း သင်ကိုအလျှင်းမပယ်ကြောင်း သင်သိလာပါ မည်။ ထိုအရာများက သင့်အား ငြိမ်သက်ခြင်းကို ပေးအုံးမည်မဟုတ်ပေ။ သင်၌ ကြီးလေးသော အပြစ်ရှိကြောင်း သိလာ၍ ကြောက်ရွံ့လာပါမည်။ သင်သည် အပြစ် ကြောင်း ပြေးမလွတ်နိုင်၊ သင်ကျူးလွန်သမျှသောအပြစ်တို့သည် ခွင့်မလွတ်နိုင်သော အပြစ်ဖြစ်ကြောင်း ခါးသီးစွာခံစားပါမည်။
ဆဌမအနေဖြင့်၊ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ သင်သည် သင့်အပြစ်၏ အဖို့အခမှမလွတ် နိုင်ကြောင်းသိရသည့်တပြိုင်နက်၊ ထိုအခါ ငြိမ်းသက်ခြင်းကို သင်လိုလားပါလိမ့်မည်၊ ထိုအခါ အံ့ဩဖွယ်ရာ ယေရှုသခင်သည်၊ မျှော်လင့်ချက်မဲ့နေသော သူတို့၏ကယ်တင်ရှင် ဖြစ်ကြောင်း သိမြင်ချင်လာပါလိမ့်မည်။ ထိုအခါ၊ ယေရှုသည် သေမထူးနေမထူး ဘ၀မှ ကယ်တင်နိုင်ကြောင်း သင်တွေ့မြင်ပါမည်။ ထိုအခါ သင်သည် ယေရှုကိုကြည့်မျှော်မည် ဖြစ်၍၊ ပြီးပြည့်စုံသော ယေရှုဘုရား၏မေတ္တာကြောင့် ကြောက်လန့်စရာမရှိ၊ ရှိသမျှ ကြောက်စရာလန့်စရာများ၊ အဝေးသို့ပြေးလွင့်သွားပါလိမ့်မည်။ အို! ထို့ကြောင့် ယနေ့ည ယေရှုကို မျှော်ကြည့်ကြပါစို့! အသွေးတော်တန်ခိုးကြောင့်၊ ကြောက်စိတ်များလွင့်သွားပါ မည်၊ သင့်အပြစ်မှလည်း ထာ၀ရဖြူစင်သန့်ရှင်းလာပါလိမ့်မည်! ထိုအခါ သင်သည် “ဤသည်ကား ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းပင်ဖြစ်၏! ကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်ဖျားနာခြင်းမှ ပျောက်ကင်းစေသော သတင်းကောင်းပေတည်း” ဟူ၍ သင်ဆိုပါလိမ့်မည်! ယခုတွင် သင်သည် ယေရှုသခင်ကို မျှော်ကြည့်နိုင်ပါသည်။ ထိုအခါ ယေရှုသည် သင့်ကိုချစ်နေ သောကြောင့် ချက်ချင်းသင့်အား အပြစ်ငရဲမှ ကယ်နုတ်ပါလိမ့်မည်!။ ထိုအခါ သေခြင်း မှ ထာ၀ရအသက်ရှင်ခြင်းသို့ ကူးမြောက်ခြင်းသင်သိလာပါမည်! ထိုအခါ အရင်တုန်းက ခရစ်ယာဉ်ညီအစ်ကိုတို့ကို မချစ်ဖူးသော်လည်း ချစ်တတ်လာပါမည်။ ထိုအခါ သင့်စိတ်နှ လုံးသားထဲ အောက်ပါ ဓမ္မတေးသီချင် သီဆိုနိုင်ပါလိမ့်မည်
(၁၇၄၀-၁၈၁၇ ခုနှစ်၊ ဂျွန်ဖေါ်စက် သီကုံးသော “တပည့်တော်
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် ဒေါက်တာဂရိတ်တန်အယ်.ချန်မှ ၁ယော၃း၁၁-၁၄ကိုဖတ်ကြား ပေးပါသည်။
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျမင် ခင်ကိတ်ဂရိဖက်စ်မှ (၁၇၄၀-၁၈၁၇၊ဂျွန်ဖေါ်
စက်သီကုံးသော “တပည့်တော် အချင်းချင်းချစ်ခြင်းကျူး”ကို သီဆိုပေးပါသည်။
“ငါတို့သည် ညီအစ်ကိုချင်းတို့ကို ချစ်သောကြောင့်၊ သေခြင်းမှအသင်ရှင် ခြင်းသို့ မိမိတို့ ကူးမြောက်သည်ကို မိမိတို့သိရကြ၏”(၁ယော၃း၁၄)။
၁။ ပထမ၊ သင်ထာ၀ရအသက်ရရှိခြင်းမဟုတ်သော အထောက်အထား၊ ၁ယော၃း၁၅၊ ယာကုပ်၂း၁၉၊ တမန်၈း၁၃၊ ၂၁၊ ၁၉၊ မဿဲ၇း၂၂-၂၃၊ ၂တိ၃း၁၃။
၂။ ဒုတိယ၊ သင်ထာ၀ရအသက်ရရှိခြင်း၏ အထောက်အထား ယောဟန်၉း၃၁၊ ၃၈၊ ရောမ၁ဝး၁၃၊ ၁ယော၃း၁၁-၁၃၊ ၂း၁၉။
၃။ တတိယ၊ သေခြင်းမှအသက်ရှင်ခြင်းသို့ မိမိတို့ကူးမြောက်သူတို့၌ မည်သို့ ဖြစ်ပျက်လာမည်နည်း။ ဧဖက်၂း၁၊ ဗျာဒိတ် ၂ဝး၁၂၊ ဆာလံ၄ဝး၁၂၊ ဟေရှာ ၆၄း၆။